सूचना – ईमेची डटकम
अनेरास्ववियू केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति
धरान – कोरोनाको उपचारमा पोषणविदलाई समावेश गराउन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसले माग गरेको छ । पोषणमार्फत रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर मात्रै कोरोनामाथी जित हासिल गर्न सकिने भन्दै अनेरास्ववियूले पोषणविदलाई समावेश गर्न माग गरेको हो । केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पस इकाई कमिटिले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति ।
मेचीनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सूचना
जोर-विजोर व्यवसाय सञ्चाचलन गर्ने सम्वन्धी मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना
मेचीनगरका सञ्चारकर्मीलाई मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना
मेचीनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिका ईटाभट्टाको सार्वजनिक सूचना
खाद्य सामग्रीहरुको बजार र ढुवानी समय सम्बन्धी मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना
सबै टोल विकास संस्थालाई मेचीनगर नगरपालिको सूचना
आदरणीय अध्यक्ष सबै टोल विकास संस्था मेचीनगर नगरपालिका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथामको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट लक डाउन घोषणा भएपश्चात् दैनिक रोजगारीमा आश्रित तथा असहाय परिवारलाई तत्काल राहत दिने सन्दर्भमा मेचीनगर नगरपालिकाका १५ वटा वडाका २६१७२ घर परिवारमध्ये तत्काललाई ३,००० घर परिवारलाई कार्यालयबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णयानुसार मिति २०७६र१२र२२ गतेका दिन वडा नं. २ को लागि १६४ […]
काठमाण्डौ : तपाईँ यूएई जाँदै हुनुहुन्छ ? जाँदै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् । यूएई विमानस्थलको नियम अनुसार अब धेरै सामान लैजान पाईंदैन । लगेमा कतिपय अवस्थामा तपाईँको सामान फलि दिन्छन् भने कतिपय सामान लगेकै कारण सजाय र जरीवाना पनि भोग्न पर्ने हुन्छ । यूएईमा खुशी र आरामदायी यात्राका लागि के सामान ल्याउन पाइने र के […]
१५ असोज, काठमाडौं । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको सूचना संसद सचिवालयमा टाँसिएको छ । उपसभामुखको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २११ को उपनियम २ अनुसार सूचना टाँसिएको सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले बताएका छन् । महराले मंगलबार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा पत्रमा ‘छानबिन नहुँदासम्मका लागि’ राजीनामा […]